10 ခရီးသွားနေစဉ်ပုံသဏ္ဌာန်နှင့်အညီနေရမည့်အချက်များ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > 10 ခရီးသွားနေစဉ်ပုံသဏ္ဌာန်နှင့်အညီနေရမည့်အချက်များ
ခရီးသွားနေစဉ်ပုံသဏ္ဌာန်ကျခြင်းသည်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်မှာသေချာသည်. သွေးဆောင်ဖြည့်စွက်အစားအစာများကိုအမြဲတမ်းကမ်းလှမ်းထားသည်. ၎င်းသည်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ပုံမှန်အားဖြင့်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းနှင့်ပေါင်းစပ်လိုက်ခြင်းကြောင့်လေ့ကျင့်ခန်းလှည်းကိုမကြာခဏကျစေနိုင်သည်. ဒီတော့ခရီးသွားနေစဉ်မှာဘယ်လိုနေလဲ? သင်ထင်သလောက်မခက်ခဲပါ. ရိုးရှင်းတဲ့စည်းမျဉ်းအနည်းငယ်ကိုသာလိုက်နာပါ, အချို့သော willpower လေ့ကျင့်ခန်း, သင်၏အားလပ်ရက်နှင့်အတူစတင်ခဲ့သောကျန်းမာရေးနှင့်အတူတူပင်သင်အိမ်ပြန်နိုင်မည်ဖြစ်သည်.
ရထားပို့ဆောင်ရေးအဆိုပါ Eco-Friendly Way ကိုရန်ခရီးသွား Is. ဤဆောင်းပါးသည်ရထားခရီးသွားနေဖြင့်တွေအကြောင်းပညာပေးတိကျမ်းစာ၌လာသည်ကား တစ်ဦးကရထား Save, ဈေးအသက်သာဆုံးရထားလက်မှတ်ဝက်ဘ်ဆိုက် ကမ္ဘာပေါ်မှာ.
ပေမဲ့ အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုအသုံးပြုခြင်း အလွယ်ကူဆုံးအစီအစဉ်ကဲ့သို့မြည်လိမ့်မည်, အစားလမ်းလျှောက်ဖို့ကြိုးစားပါ. တိုတောင်းသောအကွာအဝေးဆိုးဆိုးရွားရွားမထိုက်မတန်သောသူတို့အဘို့ကြီးသောဖြစ်ကြသည်, သင်ပိုမိုပေမယ့်, ခရီးသွားနေချိန်မှာသင့်ရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုပိုများလာလိမ့်မယ်. A long brisk walk can make all the difference when staying in shape while traveling for those who are already quite fit. Consider getting off your bus or taxiafew blocks before so that you can walk the rest. ရထားတွေရှိတယ်, ဒါပေါ့, တစ်နိုင်ငံမှတစ်နိုင်ငံသာမကခရီးတစ်လျှောက်လှည့်ပတ်သွားလာရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းလည်းဖြစ်သည်, တမြို့နှင့်တမြို့ထကြ။ ၊. သင်၏ရထားမှအနည်းငယ်မှတ်တိုင်အနည်းငယ်စော။ ခုန်ပါ, and take in the sites and sounds of your holiday destination to maximize your ability to stay in shape while traveling.
လက်ျာ Stuff ထုပ်ပိုး
သင်ခရီးသွားနေစဉ်ပုံသဏ္ဌာန်ဆက်ရှိနေရန်စီစဉ်ထားလျှင်ပြေးရန်သွားကြိုတင်ပြင်ဆင်ပါ, သို့မဟုတ်တောင်တက်, စက်ဘီးစီးတာတောင်မှသင့်မှာသင့်မှာပစ္စည်းကောင်းရှိဖို့လိုတယ်. သင်ထုပ်ပိုးနေစဉ်ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲထားပါ. သငျသညျအခြားစမတ်ဖိနပ်တစ်စုံသို့မဟုတ် Sneaker တရံအကြားရွေးချယ်ဖို့ရှိပါက, အဆိုပါ Sneaker ထုပ်ပိုး. လှပသော ဦး တည်ရာသို့ရောက်ခြင်းထက် ပို၍ ဆိုးရွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ, သင်အမှန်တကယ်ပြေးလိုကြောင်းသဘောပေါက်သည်, သင်အိမ်တွင်လက်ျာဂီယာကိုစွန့်ခွာ။ ဖြစ်သောကြောင့်မဖြစ်နိုင်ပါ. စောစောထခြင်းနှင့်ပြေးခြင်းအတွက်သွားခြင်းသည်လေ့လာရေးခရီးအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်. အခြားလူတိုင်းအိပ်ရာထဲမတိုင်မီ, ကမ္ဘာကြီးသည်တိတ်ဆိတ်ပြီးလှပသည်. သငျသညျသော်လည်းဂျင်းဘောင်းဘီနှင့်ဖိနပ်၌ဤလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး.
ဘေးဖယ်ထားပါ 15 ခရီးသွားစဉ်ပုံသဏ္Inာန်၌တည်းခိုရန်မိနစ်
ခရီးသွားနေစဉ်ပုံသဏ္ဌာန်ကျခြင်းသည်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်သာဖြစ်သည်. ခရီးသွားရင်းအစာအများကြီးစားမယ်ဆိုရင်ကြွက်သားနဲ့ကြံ့ခိုင်မှုကိုထိန်းသိမ်းနိုင်မယ်လို့သင်မျှော်လင့်မထားပါဘူး, သောက်စရာများများသောက်ပါ, နှင့်မည်သည့်လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ကြပါဘူး. သင်သာလိုအပ်သည် 15 အတွက်အသေးစားလေ့ကျင့်ခန်းရဖို့နံနက်တိုင်းမိနစ်. သငျသညျထိုကဲ့သို့သောကမ်းခြေအဖြစ်သဘာဝinရိယာ၌ရောက်နေတယ်ဆိုရင်, ဒါကြောင့်သိပ်အလုပ်များရရှိသွားတဲ့မတိုင်မီထွက်သွားကြ, နှင့်သဲပေါ်တွင်ယောဂသို့မဟုတ်အစွမ်းသတ္တိကိုလေ့ကျင့်ပါ. Cardio တစ်ပြေးနှင့်အတူအောင်မြင်နိုင်ပါသည်, ခရီးသွား, သို့မဟုတ်သွက်ရေကူး. YouTube တွင်အကြံဥာဏ်များနှင့်ပြည့်စုံသည့်ဗီဒီယိုများစွာရှိသည်, ခရီးသွားစဉ်ကြံ့ခိုင်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်တိုးတက်စေရန်အားလပ်ရက်အခြေပြုလေ့ကျင့်ခန်း. တစ်ခုခုကိုညနေခင်းမှာမလွန်ဖို့ကြိုးစားပါ, ၎င်းသည်သင်၏နံနက်လေ့ကျင့်ခန်းကိုအကျိုးသက်ရောက်စေပြီးနောက်ဆုံးတွင်ခရီးသွားနေစဉ်ပုံသဏ္stayာန်ကိုသင်မည်မျှကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းနိုင်မည်နည်း.
ဘရပ်ဆဲလ်မှ Bruges လက်မှတ်တွေ
Antwerp to Bruges လက်မှတ်တွေ
Ghent မှ Bruges လက်မှတ်တွေ
အရသာ, buttery croissants နှင့်အခြားအရသာရှိသောအရာများသည်ဖန်ကောင်တာများ၏နောက်ကွယ်မှသင့်ကိုသတိရစေနိုင်သည်, ဒါပေမယ့်ပုံမှန်အားဖြင့် willpower ပမာဏကိုထိန်းသိမ်းထားဖို့အမြဲတမ်းကောင်းပါတယ်. ရယူထားသောစားသောက်ပါ, အားလုံးအားဖွငျ့ဖွစျသညျ, သို့သော်လည်း၊. နံနက်စာအတွက်အသီးအချို့ကိုယူပါ, ခရီးသွားစဉ်ပုံသဏ္stayာန်နှင့်အညီနေရန်ကူညီရန်နေ့လည်စာအတွက်အသုပ်. ညနေစာစားလို့ရအောင်မင်းရဲ့ကယ်လိုရီကိုနည်းနည်းပဲချန်ထားလိုက်တယ်.
ခရီးသွားနေစဉ်ပုံသဏ္ဌာန်နှင့်အညီနေထိုင်ခြင်း By Taking The Stairs
သင်ကြမ်းပြင်များစွာနှင့်အတူဟိုတယ်၌နေလျှင်, သငျသညျပြီးပြည့်စုံသောအခွင့်အလမ်းရှိသည်! ဓာတ်လှေကားကိုယူမယ့်အစား, လှေကားထစ်ယူပါ! ဤရိုးရှင်းသောအလေ့အထကိုပြောင်းလဲခြင်းသည်သင်၏နေ့စဉ်အတွက်နှလုံးရောဂါတစ်ခုလုံးကိုရရှိလိမ့်မည်, နှင့်ပိုမိုကျန်းမာသန်စွမ်းနှင့်ပိုမို fitter ခရီးစဉ်အဘို့သင့်ကို set up. သင့်မှာလှေကားတစ်ခုသို့မဟုတ်လေယာဉ်တစ်စင်းသာမရှိဘူးဆိုရင်, သင်၏အနီးဆုံးareaရိယာရှိအချို့ကိုရှာပြီးခရီးသွားစဉ်ပုံသဏ္stayာန်ဆက်ရှိနေရန်ကူညီပေးပါ.
ဘတ်စကားစီးမယ့်အစားသင်လမ်းလျှောက်ဖို့အကြံပေးသလိုပါပဲ, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုဖမ်းမည့်အစားစက်ဘီးငှားရန်ကြိုးစားပါ. နိုင်ငံများစွာမှာရှိလိမ့်မယ် စက်ဘီးငှားရန်ရှိသည်. သင်သွားလိုသောနေရာအနီးသို့ရထားတစ်စီးစီးနိုင်သည်, ပြီးတော့ကျန်လမ်း၏ကျန်စက်ဘီးစီးပါ. သင်ပြန်ချင်တဲ့အခါ, ရိုးရှင်းစွာပြန်စက်ဘီး ဘူတာရုံ သင်၏စက်ဘီးကိုသင်တွေ့သည့်နေရာမှထားခဲ့ပါ, ခရီးသွားနေစဉ်ပုံသဏ္stayာန်နေဖို့အလွန်ကြီးစွာသော!
ဒေသခံလှုပ်ရှားမှုများထွက် Check နှင့်ခရီးသွားနေစဉ်ပုံသဏ္Stာန်၌နေပါ
နိုင်ငံအတော်များများတွင်မြို့ကြီးများတွင်ဒေသခံလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရန်စီစဉ်ထားသည်. ယောဂ သာဓက ပန်းခြံများသို့မဟုတ် ဖွဲ့စည်းထားသောတောင်တက် မကြာခဏရရှိနိုင်ပါသည်. ခရီးသွားစဉ်ပုံသဏ္stayာန်ရှိရန်ဤလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပူးပေါင်းပါ. CrossFit သည်ကြံ့ခိုင်မှုကိုတိုးတက်စေသောအခြားကမ္ဘာအနှံ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်, ဒါကြောင့်အတန်းထဲဝင်ဖို့အချိန်ဇယားကိုယူပါ, အထဲမှာသို့မဟုတ်အပြင်ဘက်ဖြစ်စေ. Your local guide or concierge should be able to point you in the right direction for these.
ရထားပေါ်မှာသွားရတာအရမ်းပျော်ဖို့ကောင်းတယ်, သင်အမှန်တကယ်ရွေ့လျားနေစဉ်လေ့ကျင့်ခန်းများအတွက်ဤမျှလောက်အခွင့်အလမ်းမရှိ. လေယာဉ်ပျံများအတွက်လည်းအလားတူပင်. သင်သည်သင်၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်သို့မဟုတ်ရထားကိုစောင့်နေစဉ်, အချို့နားကြပ်များတပ်ဆင်ရန်နှင့်ခရီးသွားနေစဉ်ပုံသဏ္stayာန်ဆက်ရှိနေရန်ကူညီရန် terminal ကိုပတ်ပတ်လည်အရှိန်အဟုန်ဖြင့်လမ်းလျှောက်ပါ. သင့်ရဲ့ခရီးဆောင်အိတ်ကိုအရင်လုံခြုံအောင်သေချာထားပါ, သို့သော်! သင်ယုံကြည်စိတ်ချရသောသူနှင့်အမြဲတစေသင်၏သယ်ဆောင်သွားသောအရာများကိုထားခဲ့ပါ. သင်လမ်းလျှောက်စဉ်, အချို့သောအဆုတ်များကို stroll သို့ပေါင်းစပ်ပါ. သင်ရယ်စရာကောင်းလိမ့်မည်, ဒါပေမယ့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကနောက်မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်. ခရီးသွားစဉ်ပုံသဏ္ာန်နှင့်အညီနေထိုင်ခြင်းသည်မိမိကိုယ်ကိုတင်ပြသည့်အခွင့်အရေးတိုင်းကိုယူခြင်းဖြစ်သည်. သင်၏ရထားလက်မှတ်ကိုယခုတွင်အွန်လိုင်းဘွတ်ကင်လုပ်ပါ, နှင့်ပုံသဏ္Stာန် Stay မှထိထိရောက်ရောက်သုံးစွဲဖို့သင့်ကိုယ်သင်အချိန်ပိုပေးပါ!
လေ့ကျင့်ခန်းခွေများသည်ပေါ့ပါးသည်, သယ်ဆောင်ရန်လွယ်ကူပြီးခရီးသွားစဉ်အနားယူရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်. သင်သည်သင်၏အခန်းထဲမှာသူတို့ကို set up နိုင်ပါတယ်, နှင့်အဆင်ပြေဆုံးအာကာသအတွင်းအသေးစားအားကစားရုံ circuit ကိုဖန်တီးပါ. သင်၏တိုက်နယ်၏ပတ်ပတ်လည်သို့မဟုတ်ငါးခုကိုနေ့တိုင်းလုပ်ရန်အချိန်ယူပါ, တဖန်သင်တို့အရသာ pastries အစာစားခြင်းနှင့်ပတ်သက်။ ဒါမကောင်းတဲ့မခံစားရပါလိမ့်မယ်.
ရေကူးကန်အားဖြင့်ကော့တေးရှိခြင်း, ဒါမှမဟုတ်အရက်ဆိုင်ထဲမှာရေခဲဘီယာအမြဲကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်. Overdoing it will result inadrop in your fitness. Not just because of the sugar but also the lack of motivation the next day. သငျသညျလိုလျှင်ထူးဆန်းသောက်ပါ, ဒါပေမယ့်အနည်းဆုံးမှာသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ကြိုးစားပါ. သကြားချိုမြိန်သောကော့တေးများသည်ကယ်လိုရီအလွန်များကြောင်းသတိရပါ, ဘီယာနှင့်ပင်အဖြူစပျစ်ရည်ကိုဖြစ်သကဲ့သို့. ခရီးသွားနေစဉ်ပုံသဏ္stayာန်ဆက်ရှိနေရန်ကူညီရန်သူတို့ကိုစီစဉ်ခြင်းဖြင့်သင်၏စီစဉ်ထားသောလေ့ကျင့်ခန်းများသည်များစွာခက်ခဲစေသည်.
ကိစ္စရပ်အများစုတွင်ခရီးသွားခြင်းသည်ပျော်စရာများစွာဖြစ်သည်. ဖြစ်နိုင်ပါသည်, သို့သော်, မည်သည့်ကြံ့ခိုင်ရေးစစ်အစိုးရမှအလွန်နှောင့်အယှက်ဖြစ်လိမ့်မည်. ခရီးသွားစဉ်ပုံသဏ္ဌာန်ကျခြင်းသည်ကျန်းမာသောအစားအစာအစီအစဉ်ကိုလိုက်နာခြင်းနှင့်တတ်နိုင်သမျှလေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်. သကြားဓာတ်အရက်ကိုကန့်သတ်ရန်မမေ့ပါနှင့်. ရှေးခယျြ တစ်ဦးကရထား Save, သင်၏ခရီးကိုပျော်မွေ့ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးပါမည်!
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “10 ခရီးသွားနေစဉ်ပုံသဏ္ဌာန်နှင့်အညီနေရမည့်အချက်များ” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သငျသညျဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. တစ်ဦးနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည် ဤ blog post မှ link ကို. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/tips-staying-shape-traveling/ ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
အောက်ပါလင့်ခ်များတွင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, <- ဒီ link ကိုစာမျက်နှာများတွင်လေယာဉ်ဆင်းသက်အင်္ဂလိပ်လမ်းကြောင်းများအဘို့ဖြစ်၏, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/es_routes_sitemap.xml, ပြီးတော့သင်ရွေးချယ်သောသင်၏ fr သို့မဟုတ် nl နှင့်အခြားဘာသာစကားများကို es သို့အစားထိုးနိုင်သည်.
europetravel longtrainjourneys StayFit StayInShape ရထားခရီးသွား Travelingtips